Endrik'io pejy io tamin'ny 5 Febroary 2019 à 06:22
1 657 octets ajoutés , il y a 1 an
Endrik'io pejy io tamin'ny 5 Febroary 2019 à 05:42 (hanova)
(Namafa soratra tsy ilaina)
Endrik'io pejy io tamin'ny 5 Febroary 2019 à 06:22 (hanova) (esory)
Nivoatra avy amin'ny fakana tahaka ny fitsipiteny tranainy ho an'ny fiteny eoropeana ka nankaty amin'ny fitsipiteny vokatry ny fikarohana amin'ny [[haiteny]] malagasy ny fandalinana ny amin'ny atao hoe fiendrika na fitodika ao amin'ny fiteny malagasy. Ny mpahay teny rehetra amin'izao anefa mbola tsy mitovy hevitra ny amin'izany, ka ny tena fantatra dia ny fitsipiteny araka ny haiteny ara-drafitra izay notarihin'i [[Siméon Rajaona]] sy ny fitsipiteny araka ny haiteny ara-piofohana tarihin-[[Rabenilaina Roger-Bruno]].
ArakaTsy nynavahan'ilay mpahay teny malagasy Siméon Rajaona ny hoe fitodika sy ny hoe fiendrika. Araka ny mpahay teny malagasy dia maro ny fitodika ao amin'ny fiteny malagasy, sady tsy ny matoanteny ihany no voakasika fa ny reniteny sasany toy ny anarana sy ny mpamari-toetra koa. Naorin'ilay mpahay teny amin'ny endriky ny [[tsirinteny]] ao amin'ny matoanteny na amin'ny sokajin-d[[reniteny]] hafa azo atao entimilaza sy ny karazana [[Fameno (fitsipiteny)|fameno]] azo atao [[Lazaina (fitsipiteny)|lazaina]] ampiarahina aminy izany fanavahana ireo karazana fitodika izany.
=== Fitodika sy fiendrika araka an-Rabenilaina ===
NyAraka fitodikany syhevitr'ilay nympahay fiendrikateny atao hoe Rabenilaina Roger-Bruno dia tsy mahakasika afa-tsy ny [[matoanteny]] ny fitodika sy ny fiendrika. Ny hoe ''fitodika'' sy ny ''fiendrika'' dia anarana roa iantsoana zavatra roa samy hafa ao amin'ny fiteny nefa misy ifandraisany, ka ny voalohany mahakasika ny endriky ny matoanteny ary ny faharoa kosa momba ny hevitry ny matoanteny.
==== FiendrikaNy aofiendrika amin'nyaraka fiteny malagasyan-Rabenilaina ====
Ny fiendrika dia mianinamiankina amin'ny endriky ny tsirinteny amin'ny matoanteny tsy ampifandraisina amin'ny fifandraisany amin'ny [[Vara (fitsipiteny)|vara]] sy ny fameno. Ireto avy ireo fiendrika ireo:
*Fiendrika mañano: ''Mikapa hazo amin'ny antsy ny ankizy''. ''Mitaraina ny vahoaka noho ny ataon'ny mpitondra''.
* Fiendrika añanovana: ''Ikapan'ny ankizy ny hazo ny antsy''.
==== FitodikaNy aofitodika amin'nyaraka fiteny malagasyan-Rabenilaina ====
Ny fitodika dia miankina amin'ny hevitry ny matoanteny mifandray amin'ny vara sy ny fameno. Ireto avy ireo fitodika ireo izay misokajy roa:
* Fitodika toejavatra
* Fitodika zoina (iharana, fitaovana, tanty, tolorana, toerana, alalana).
Ny fitodika toejavatra dia misy karazany maro:
*Fitodika toejavatra fotoana: ''Isakafoanana matetika ny antoandro''.
*Fitodika toejavatra toerana: ''Ananangonany ahitra ny any an-tsaha''.
*Fitodika toejavatra fomba: ''An-katezerana no namaliany ny fanontaniako''.
*Fitodika toejavatra antony: ''Ahazoana entana maro ny fihenam-bidy''.
*Fitodika zoina iharana: ''Kapohina kibay ny omby''.
*Fitodika zoina fitaovana: ''Akapoka ny omby ny kibay''.
*Fitodika zoina tanty: ''Rosoana sakafo ny olona nasaina''.
*Fitodika zoina tolorana: ''Ivarotako ny fiarako ilay mpanan-karena''.
*Fitodika zoina toerana: ''Ijanonan'ny fiara ny eo amoron-dalana''.
*Fitodika zoina alalana: ''Anenjehana lambo ny alika''.
== Fiendrika ao amin'ireo fiteny eoropeana ==
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/965822"